ပုံမှန်ထက် ရင်သားသေးတဲ့ယောင်းတွေ အထာကျကျလန်းနိုင်မယ့် ဖက်ရှင် (၅) မျိုး – For her myanmar
ပုံမှန်ထက် ရင်သားသေးတဲ့ယောင်းတွေ အထာကျကျလန်းနိုင်မယ့် ဖက်ရှင် (၅) မျိုး
Posted on April 12, 2019 Author Stella	Comment(0)
ရင်သားသေးလို့ မဟော့ဘူးလို့ ဘယ်သူပြောလဲ ?
ယောင်းတို့ရေ … သူများတွေနဲ့ ယှဉ်ရင် ကိုယ့်အရွယ်မှာ ရှိသင့်သလောက် ရင်သားမရှိလို့ စိတ်ညစ်နေလား ? မညစ်ပါနဲ့နော် “Flat is the new hot” ပါ။ သူများတွေဝတ်ရင် ရိုင်းသယောင်ထင်ရတဲ့ ဖက်ရှင်အလန်းစားတွေကို ရင်သားသေးတဲ့ ကိုယ် ဝတ်လိုက်ရင် ချစ်စရာတောင် ကောင်းသွားသေးတတ်တာမျိုး မဟုတ်လား … အဓိကက ဝတ်တတ်ဖို့နဲ့ ယုံကြည်ချက် အပြည့်ရှိဖို့ပါပဲ… ဒီတော့ Stella က ရင်သားသေးတဲ့ ယောင်းတွေ အထာကျကျမိုက်နေဖို့ ဘယ်လိုဝတ်ရမလဲဆိုတာကို ပြန်ဝေမျှပေးမယ်နော်။
ရင်သားသေးတဲ့သူတွေက ရင်ဟိုက်တွေ သိပ်မဝတ်ကြဘူးနော်.. ဘာလို့လဲတော့ မသိဘူး.. ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှု ရှိရှိသာ ဝတ်ချလိုက်ပါ။ ရင်သားသေးတဲ့သူတွေ ရင်ဟိုက်တွေ ဝတ်တဲ့အခါ အရမ်းကို ဖက်ရှင်ကျပြီး ချစ်စရာကောင်းတယ်ဆိုတာ ယုံ…
(၂) ဇာအင်္ကျီပါးပါး (Sheer Top)
ရင်သားသေးတဲ့ယောင်းတွေအတွက်တော့ ဇာအင်္ကျီပါးပါးကို အောက်ခံဘရာလှလှလေးနဲ့ တွဲဝတ်လိုက်တဲ့အခါ အမြင်လည်းမရိုင်းသလို ပေါ့ပေါ့ပါးပါးအသွင်လည်း ဖြစ်စေပါတယ်။
ကုတ်အင်္ကျီနဲ့ ဘောင်းဘီရှည်ကို သူများတွေလို အောက်ခံအင်္ကျီပွပွထူထူတွေနဲ့ တွဲမဝတ်ဘဲ bralette လို့ခေါ်တဲ့ ဇာအနားသတ်အလှဘရာလေး တစ်ထည်နဲ့ ဝတ်ကြည့်ပါ။ ဖက်ရှင်ကျပြီး မမိုက်ရင် ကြိုက်သလိုပြော …
Related article >>> ဖက်ရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီး မဖြစ်မနေ ရှောင်ရမယ့်အချက် (၆) ချက်
Spaghetti straps လို့ခေါ်ကြတဲ့ ကြိုးတစ်ချောင်းတွေကလည်း ရင်သားသေးတဲ့ ယောင်းတွေကို ဟော့ဖြစ်နေစေတဲ့ အင်္ကျီတွေပါပဲ ယောင်းတို့ရေ…
(၅) Tube top
အခုခေတ်စားနေတဲ့ tube top တွေကလည်း ရင်သားသေးတဲ့ယောင်းတို့အတွက် အံကိုက်ပါပဲနော်။ မပြောခဲ့ဘူးလား “Flat is the new hot” ပါလို့ …
ကဲ … ဒီလောက်ဆိုရင် ရင်သားသေးတဲ့ယောင်းတွေအနေနဲ့ အဝတ်အစားကို ဘယ်လိုဖက်ရှင်ကျကျဝတ်ရမယ်ဆိုတာ သိကြပြီပေါ့နော်။ ဘယ်အချိန်မဆိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိနေဖို့လည်း မမေ့နဲ့ဦး။ ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို ချစ်ပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ချစ်ပါ။ အမြဲတမ်းလှနေပါစေ ယောင်းရေ …
ရငျသားသေးလို့ မဟော့ဘူးလို့ ဘယျသူပွောလဲ ?
ယောငျးတို့ရေ … သူမြားတှနေဲ့ ယှဉျရငျ ကိုယျ့အရှယျမှာ ရှိသငျ့သလောကျ ရငျသားမရှိလို့ စိတျညဈနလေား ? မညဈပါနဲ့နျော “Flat is the new hot” ပါ။ သူမြားတှဝေတျရငျ ရိုငျးသယောငျထငျရတဲ့ ဖကျရှငျအလနျးစားတှကေို ရငျသားသေးတဲ့ ကိုယျ ဝတျလိုကျရငျ ခဈြစရာတောငျ ကောငျးသှားသေးတတျတာမြိုး မဟုတျလား … အဓိကက ဝတျတတျဖို့နဲ့ ယုံကွညျခကျြ အပွညျ့ရှိဖို့ပါပဲ… ဒီတော့ Stella က ရငျသားသေးတဲ့ ယောငျးတှေ အထာကကြမြိုကျနဖေို့ ဘယျလိုဝတျရမလဲဆိုတာကို ပွနျဝမြှေပေးမယျနျော။
ရငျသားသေးတဲ့သူတှကေ ရငျဟိုကျတှေ သိပျမဝတျကွဘူးနျော.. ဘာလို့လဲတော့ မသိဘူး.. ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ ယုံကွညျမှု ရှိရှိသာ ဝတျခလြိုကျပါ။ ရငျသားသေးတဲ့သူတှေ ရငျဟိုကျတှေ ဝတျတဲ့အခါ အရမျးကို ဖကျရှငျကပြွီး ခဈြစရာကောငျးတယျဆိုတာ ယုံ…
(၂) ဇာအင်ျကြီပါးပါး (Sheer Top)
ရငျသားသေးတဲ့ယောငျးတှအေတှကျတော့ ဇာအင်ျကြီပါးပါးကို အောကျခံဘရာလှလှလေးနဲ့ တှဲဝတျလိုကျတဲ့အခါ အမွငျလညျးမရိုငျးသလို ပေါ့ပေါ့ပါးပါးအသှငျလညျး ဖွဈစပေါတယျ။
ကုတျအင်ျကြီနဲ့ ဘောငျးဘီရှညျကို သူမြားတှလေို အောကျခံအင်ျကြီပှပှထူထူတှနေဲ့ တှဲမဝတျဘဲ bralette လို့ချေါတဲ့ ဇာအနားသတျအလှဘရာလေး တဈထညျနဲ့ ဝတျကွညျ့ပါ။ ဖကျရှငျကပြွီး မမိုကျရငျ ကွိုကျသလိုပွော …
Related article >>> ဖကျရှငျနဲ့ပတျသကျပွီး မဖွဈမနေ ရှောငျရမယျ့အခကျြ (၆) ခကျြ
Spaghetti straps လို့ချေါကွတဲ့ ကွိုးတဈခြောငျးတှကေလညျး ရငျသားသေးတဲ့ ယောငျးတှကေို ဟော့ဖွဈနစေတေဲ့ အင်ျကြီတှပေါပဲ ယောငျးတို့ရေ…
အခုခတျေစားနတေဲ့ tube top တှကေလညျး ရငျသားသေးတဲ့ယောငျးတို့အတှကျ အံကိုကျပါပဲနျော။ မပွောခဲ့ဘူးလား “Flat is the new hot” ပါလို့ …
ကဲ … ဒီလောကျဆိုရငျ ရငျသားသေးတဲ့ယောငျးတှအေနနေဲ့ အဝတျအစားကို ဘယျလိုဖကျရှငျကကြဝြတျရမယျဆိုတာ သိကွပွီပေါ့နျော။ ဘယျအခြိနျမဆိုကွညျ့လိုကျတာနဲ့ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျယုံကွညျမှုအပွညျ့ရှိနဖေို့လညျး မမနေဲ့ဦး။ ကိုယျပိုငျဆိုငျထားတဲ့ ခန်ဓာကိုယျကို ခဈြပါ။ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျခဈြပါ။ အမွဲတမျးလှနပေါစေ ယောငျးရေ …
Tagged Fashion, fashionista, Style, stylist, tips, trends, what to wear
Posted on July 30, 2018 July 30, 2018 Author For Her Myanmar
Posted on January 9, 2019 Author Sugar Cane
Posted on March 15, 2019 March 15, 2019 Author Stella
ဒီထဲမှာ ကိုယ်ပါနေရင် ပြင်ကြတော့နော်